अरु देशका सरकार देख्दा कति रहर लाग्दा तर हाम्रा देशका शासकहरु सम्झदा पनि मुटु फुट्छ !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
विनोद त्रिपाठी -प्रश्न यो होइन कि सरकार के गरिरहेछ । प्रश्न यो हो, सरकारले यो किन गरिरहेछ ? जब स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले घरमा पाहुना आएका छन्, घर जानुछ भन्दै जवाफ नदिई संवेदनहीन भएको देख्दा सरकारले यो किन गरिरहेको सोध्न मन लाग्छ । यो बेला सम्झन मन लाग्छ, भुटानका प्रधानमन्त्री केहि दिन अघि कोरोनाको आशंकामा संक्रमित विरामीसंगै बसेर रातभरि नसुतेको ।
युरोपियन मुलुकहरुका सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरु जनतासंगै रोएको । चीनका राष्ट्रपति कोरोनाकै केन्द्रविन्दुमा जोखिम मोलेर पुगेको । विभिन्न देशका मन्त्रीहरु चिन्ताले भोक भोकै बसेको । विभिन्न देशहरुले सडक पुरै खाली गराएर करोडौं जनताका घरघरमा पुगेर निरिक्षण गरेको । दृष्यमा देख्न सकिन्छ, अहिले विकसित मुलुकका सडकहरु भुत शहरहरु जस्ता सुनसान छन् ।
तर, काठमाडौंका सडकहरुमा ढल मिसिएको पानीले पखालेको तरकारी पाक्न छोडेको छैन । त्यहिं झिंगा भन्केको खानेहरु झिंगे दाउ पर्खंदै बैराग्यको भीडमा सहभागी भएको । उता, ल्याव टेष्ट विनाका मासु पसल खुलमखुला चलेकै छन् ।चावहिलमा मकै पोल्नेको भीड बाक्लिंदो छ ।
विश्वकै भद्रगोल शहरहरु भएको देश बंगलादेशका जस्तै काठमाडौंको यो अत्यास लाग्दो बजारमा रमिता देखाउन आएकाहरुलाई गाउँगाउँ पठाउन सरकारले किन ढिलाई गरेको ? लौरो लगाएर खेद्दा पनि हुन्छ । त्यो खेदाई जनताकै हितका लागि हुने थियो ।
तर, यी दृष्य देख्दा र जंगलीहरुले असभ्य वनेर सडकमा हर्न बजाएको देख्दा लाग्छ, एक तहका जनताको असभ्यसंग सरकार मीत लगाइरहेछ । र भन्न मन लाग्छ सरकारले यो किन गरिरहेछ ? हामीलाई लाग्ने गरेको छ, अरु देशका सरकार देख्दा कति रहर लाग्दा । हाम्रा देशका शासकहरु सम्झंदा नि मुटु फुट्ला जस्ता ।
कुनै बेला नेपाली कांग्रेसको असक्षमवाट आजित भएका तिनै जनताका हातहरुले कम्युनिष्टलाई भोट दिए । आज कांग्रेसलाई नै उछिनेर बर्तमान कम्युनिष्ट सरकार जनताप्रति यति संवेदनहीन हुँदा लाग्छ, सरकारले यो किन गरिरहेछ ?
१, ट्याक्सीको ज्यादती र अभद्रतावाट बल्लतल्ल मुक्ति पाउन लागेका बेला टुटल र पठाओको सभ्य सेवालाई सरकारले किन वेला बेलामा तर्सारहन्छ ?
२, फेरिएकादेखि पुराना मन्त्रीहरुसम्म जनताप्रति किन उत्तरदायी वन्न नसकेका ? कति गैरजिम्मेवार । छि छि । दैनिक घटनालाई सम्झिंदा पनि प्रशंसा गर्ने शब्द कहिं भेटिन्न ।
३, एक बर्ष अघि त्यतिकै बढेको तिन शय प्रतिशतसम्मको महंगी अहिले कोरोनाको वहानामा झन झन अचाक्लिएको छ । कालाबजारीले नेपाल पुरै कब्जामा लिइसकेका छन् । तर, सरकारका गफ देख्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ, सरकारले यो किन गरिरहेछ ?
यति बेला मौनतामा बस्न मन लागेन । त्यसैले , मन भित्रवाट अंकुरिएका आवाजहरुले यी र यावत प्रश्नहरु सरकारसंग सोधिरहेका छन् ।